Bilaogy Kenyana: Noroahin’i Kibaki daholo ny minisitra rehetra (2005) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2019 18:15 GMT
Natsangana vao haingana ny Kenyan Open blog, ny hevitra ambadik'izany dia ny mba “ahafahana manara-maso sy mamantatra ireo lohahevitra manan-danja eo amin'ny tontolon'ny bilaogy Kenyana na iadian-kevitra ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Kenyana midadasika.”
Moa ve ity bilaogy misokatra, miaraka amin'ny fisantarana andraikitra tahaka ny Nchi Yetu Daily ity ka afaka mampandroso ny tontolon'ny bilaogy Kenyana ho amin'ny maodely mizara telo momba ny fandraisana andraikitra ara-tsosialy? (manangom-baovao, maneho hevitra sy miady hevitra, ary miasa – Raha hijery bebe kokoa amin'izany, vakio ny lahatsoratr'i Ethan Zuckerman momba ny “Manome sehatra ho an'ny firenena an-dalampandrosoana ho ao amin'ny fahefana ambony faharoa”) Ialana tsiny azafady ny fiovan-kevitra kely, andeha hiverina ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Kenyana .
Taorian'ny fitsapan-kevi-bahoaka natao 15 andro lasa izay, tsy nanana kabinetra nandritra ny tapa-bolana i Kenya raha nanalava ny parlemanta ny filoha Kibaki ary nandroaka ireo minisitry ny kabinetra rehetra. Manangana indray ny kabinetra izy ankehitriny. Tsy hita miharihary ao amin'ny kabinetra vaovao ireo filohan'ny hetsika Demokratika Laoranjy, izay mbola manana fahefana araka ny nasehoan'ny latsa-bato tamin'ny referandaoma. Mental acrobatics mahita fa tsy manao zavatra tsara ireo rehetra manoro hevitra ny filoha Kibaki tato ho ato.
Tamin'ny fotoana nanoratana ity fizarana ity, minisitra 3 sy minisitra lefitra 17 no nandà ny toeran'izy ireo natolotry ny filoha Kibaki. Tamin'izany, manamarika i mental acrobatics fa mety te-hihevitra isika fa manao izany amin'ny fahatsapana andraikitra nasionaly izy ireo, saingy mampiseho tombontsoan'ny antoko kosa ny famantarana sasany.
kibara's miresaka momba ny kabinetra vaovao?
Kenyan pundit izay manatrika ny fihaonamben'ny global voices any Londra, manondro lahatsoratra momba ny tsy fisian'ny vehivavy ao amin'ny kabinetra vaovao.
M kosa miresaka ny fomban'ny boky tantara amin'ny fandrafetana ny kabinetra, feno miaraka amin'ny […] cendrillon sy ireo olona fohy kely…
Kenyan Pundit amin'ny fombany mampahafantatra manontany hoe “Inona ny olana ao amin'ny Asa fanaovan-gazety Kenyana?”
Kenyan Prodigal daughter milaza fa misy fihisarana amin'ny fomba fanatanterana zavatra any amin'ny foibe sasany fanaovana taratasy, mifanohitra amin'ny endrika mavitrika ao Nairobi.
Mitatitra i Bankelele fa hisokatra amin'ny 16 Desambra ao Nairobi ny fikorisana an-dranomandry, ary manana ny lisitry ny fandaharan'asa (tsy-kabinetra) izy. Tamin'ny fiandohan'ny herinandro, nitatitra momba ny horohorontany nanakorontana an'i Nairobi izy (nisy horohorontany tany Tanzania)
Satria efa hifarana ny taona, Maitha ao amin'ny bilaoginy swahili – Mawazo na Mawaidha, hisaintsaina momba ireo songadina nandritra ny taona, ny tsara sy ny ratsy, ary manasa ny hafa hizara ny ‘folo tsara indrindra’ ho an'ny taona 2005.